TAJAAJILLI BIYYA ALAA TEETTANII MAATII BIYYA JIRUUF BISHAANII FI IFAA KAFALUUFII DANDEESSISU QOPHAAYEE JIRA – OROMO TECH
Lammiiwwan Itiyoophiyaa biyya alaa jairaatan firoottan isaanii kan biyya keessa jiraataniif gatii/kafaltii ibsaa bishaanii fi kanneen biroo kallattiidhaan kafaluuffii dandahan tajaajilli dandeessisu yeroo muraasa booda jalqabuuf jira.
Waldaan dhuunfaa KIFYA jedhamu “MasterCard” waliin ta’uu dhaan tajaajilli inni labse kun yeroo dhiyootti Itiyooophiyaa keessatti kan eegalu ta’uu isaatii fii achii booda biyyoota Afriikaa kanneen biroo keessatti kan itti fufu ta’uun beekameera.
Baasiin kunis marsariitii/website irratti kan raawwatamu ta’uun ibsameera. Tajaajilli kun kan kennamus application kanaaf gargaaru mobile fi komputera irratti fe’uun akka ta’e beekkamee jira
Obbo Muniir Durii itti gaafatamaan waldaa Kiffiyaa jedhamuu namoonni bakkuma jiraatan irraa baasii kana baasuu ka danda’an ta’uu illee ibsaniiru. tajaajilli kun magaalaa keessa kanneen jiraatan qofaaf utuu hin taane namni mobaayila qabu martinuu fayyadamaa waan ta’eef baadiyyaallee ofitti haammata waan taheef kuni namoota biyya alaa teettanii warra keessan karaa kanaan qarqaaruu barbaaddaniif gammachuu guddaafha jennee amanna.
Kana waan taheef nutis odeeffannoo kana itti dhiheenyaan hordofnee yeroo inni jalqabetti odeeffannoo guutuu fi akkataa itti fayyadama isaa isiniif qabannee dhiyaanna. Hagasitti like share godhuun nu hordofaa
Posted on July 6, 2017 0 By oromotech	ODUU/NEWS Posted in ODUU/NEWS, OROMOTECH, OROTECH, TECHNOLOGY
Next Post AKKAATAA YEROO NAMAAF BILBILLU LAKKOFSA KEENNA DHOKSU DANDEENNU
Previous Post QABXII 10′ KAN BULTII KEENYA DIIGUU DANDAHAN